३. निजी विद्यालयले बाल मनोविज्ञान बिगारेका छन् । कम्तीमा पनि ६ देखि ७ वर्षको बालबालिकालाई मात्र विद्यालय र मोन्टेश्वरीमा भर्ना गर्नुपर्ने बाल मनोविज्ञानले भन्छ । तर निजी विद्यालयले हिड्न नसक्ने १२ देखि १४ महिनाकै बालबच्चा मोन्टेश्वरीमा भर्ना गरिन्छ र जबर्जस्ती पेन्सिल समाएर लेख्न सिकाइन्छ । यो जस्तो ठूलो अपराध अरु के हुन्छ ? बाल मनोविज्ञानले बच्चाहरुको मस्तिष्क सिक्न तयार नभईकन जबर्जस्ती लेख्न र पढ्न सिकान्छ भने पछि उसको उत्तर बाल्यअवस्थामा गइसकेपछि त्यो सिकाई खत्तम हुन्छ । उसको जति मस्तिष्क र शरीरको विकास राम्रो हुन सक्दैन् ।जसकारण विद्यार्थीले भोलि सबै कुरा कण्ठ पारेर पढ्न सक्ला । तर उसको सिर्जनात्मक र सोच्न सक्ने क्षमता भने ह्रास हुन्छ । यसकारण पनि निजि विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ । घोकन्ते शिक्षा मात्रै रटाइएको छ । फिनल्याण्ड सरकारले मस्तिष्कको पूरा विकास नभईकन विद्यार्थीलाई कक्षामा भर्ना गर्न दिँदैन । अर्थात् ७ वर्ष पूरा भएका बालबच्चालाई मात्र विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुमति दिन्छ । त्यसअघि बच्चालाई खेल्न, आफैँले सिक्न र खुल्ला वातावरणमा सबै कुराको अनुभव गर्न छोडिदिन्छ । त्यो किनभने बच्चाको ‘नशा, स्नायु, मष्तिष्क’ सबै कुराको विकासका लागि हो । अहिले यसको ख्याल गरिएन भने निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हो । त्यसकारण निजी विद्यालय बाल मनोविज्ञान विरुद्ध छन् र बन्द गर्न लाग्नुपर्छ ।
७. दादागिरी देखाउने, कानुन नमान्ने । निजी विद्यालय कानुनको सजायका भागिदार छन् । तर कहिल्यै नमान्ने । सरकारले बनाएका कुनै पनि नीति, निर्देशिका, कानुन नमान्ने किन ? किनकी उनीहरु सरकारभन्दा आफू माथि छौँ भन्ने ठान्छन् । यो देशमा कोही पनि कानुन र सरकारभन्दा माथि छैनन् । यो बेथिती ल्याएका छन् । यसलाई तोड्नका लागि पनि निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले बनाएका नीति नमान्ने निजी विद्यालय को हुन् ? कि समानान्तर सरकार बनाएर चलाउनुपर्यो । होइन भने नेपाली कांग्रेसको जस्तो छाँया सरकार बनाउनुपर्यो ।
१०. अभिभावकबाट पैसा लुट्ने, सांसद बन्ने । विद्यार्थीबाट भर्नाका नाममा, ट्युसन पढाउने नाममा लाखौँ रुपैयाँ उठाउने । अनि त्यो पैसा लिएर सांसद बन्ने । एउटा गाउँपालिकाको टिकट पाउन त १५/२० लाख रुपैयाँ नदिइकन हुदैन् भने सांसद बन्न त कम्तीमा ५ करोड चाहियो नि । त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? त्यही विभिन्न वाहनामा अभिभावकबाट शुल्क उठाउने र सांसद बन्ने । यसअघि त धेरै थिए । अहिले कम छन् । तपाईको पैसा मेरो पैसा लिएर हामी उहाँलाई सांसद बनाउनलाई निजी विद्यालय किन चाहियो ?(शिक्षाविद् वाग्लेले बुधबार शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले गरेको कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)